Archive du 20180524
Mpiasan’ny orinasa Fanalamanga Manohana ny tolona saingy manohitra ny fanakatonana ny orinasa
Nivoaka tamin’ny fahanginany omaly ireo mpiasan’ny orinasa Fanalamanga maro isan-tsokajiny manoloana ny zava-misy ankehitriny.
Praiminisitra Solonandrasana Nizara vary sy menaka ho an’ny mpino Silamo
Nanolotra vary 100 kitapo, lafarina 49 kitapo, siramamy 50 kitapo ary menaka 100 litatra, ho an’ireo mpino silamo ao amin’ny Mosquée 67 Ha ny Fitondram-panjakana, ka ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier, narahina Mpikambana sasantsasany ao amin’ny Governemanta no solon-tena tamin’izany omaly.
MBS Anosipatrana Manomboka ny asa fanatsarana
Manomboka ny asa fanatsarana ny orinasan-tserasera Malagasy Broadcasting System (MBS) eny Anosipatrana ankehitriny.
“Rallye Motul 1ère edition” Dingana 1 amin’ny tompondakan’i Madagasikara 2018
Mahatratra 41 ireo fiara handray anjara amin’ny “rallye Motul 2018” ho tanterahina eto Antananarivo ny 25,26 ary 27 mey ho avy izao.
Barean’i Madagasikara Hanainga anio ho atsy Afrika Atsimo
Araka ny fantatra dia hanainga anio ho atsy Afrika Atsimo hiatrika ny fifaninanana baolina kitra “Cosafa Cup 2018” ny Barean’i Madagasikara.
Basikety N1 B vehivavy sy U 20 zatovolahy Miditra amin’ny lalao 1/8-ndalana anio ny U 20 lehilahy
Tsy mbola niova
Nahavelom-panantenana ny mpanara-baovao sy ny ankamaroan’ireo olom-pirenena ny nahita ireo vahoaka marobe voatarik’ireo depiote miisa 73 tetsy amin’ny Parvis Analakely ny 21 aprily teo.
Famatsiana fanafody Misy olana kely ny toerana sasany
Ankoatra ny fitadiavana ny sakafo dia anisan’ny olana goavana iray sedrain’ny mponina ihany koa ny tsy fisian’ny fanafody eny amin’ny toeram-pivarotana voatokana ho amin’izany, indrindra ho an’ireo manana ny marary.
Ady amin’ny aretina tazomoka Norarahana ranom-panafody ny tao Ambohijanaka
Mbola mahazo vahana ny aretina tazomoka eto amintsika. Raha tsiahivina, mbola nahatratra sivy ireo olona namoy ny ainy vokatr’ity aretina iray ity hatramin’ny fiandohan’ny taona ka tany amin’ny faritra avokoa ny ankamaroan’izy ireo.
La grande braderie de Madagascar Nisy indray ireo mpandray anjara tsy afa-nihetsika
Nisokatra nanomboka omaly etsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina, ilay hetsika « La grande braderie de Madagascar » natokana ho an’ny fetin’ny reny, karakarain’ny Madavision.
Vinaninkarena Antsirabe Rongony 30 kg saron’ny zandary
Rongony nilanja 30 kg indray no saron’ny zandary avy amin’ny BPR “ Brigade de la Police Routière” Antsirabe, nialoha kely ny fetin’ny Pentekosta teo.
NIGADRA NOHO NY FACEBOOK
Olona iray no nigadra roa taona an-tranomaizina noho ny fanaovana « compte fake » amin’ny tambajotra sosialy Facebook. Izany dia taorian’ny fitorian’ny fikambanan’ny teratany indiana (CFOIM) eto amintsika noho ny fandranitana ny olona hankahala azy ireo. Nosamborina ny olona voakasika ary nidoboka am-ponja izy taorian’ny nitsaràna azy.
Fikambanana “TSMA” Toamasina Mitohy ny fanampiana ara-tsosialy fanaony
Miezaka hatrany amin’ny fanampiana ireo fikambanana, vondron’olona, mila fanampiana aminy ireo fikambanana samy hafa misehatra amin’ny asa sosialy eto Toamasina, na eo aza ny olana samy hafa misy ara-politika sy ara-tsosialy misy eto amintsika izao, izay tena liana amin’ny fisian’izy ireo.
Seranan-tsambon’i Toamasina Mandringa ny asa
Raha jerena ety ivelany dia mihodina hatrany ny raharaha famoahana entana eo anivon’ny seranan-tsambon’i Toamasina, na eo aza ny fitokonan’ireo mpiasan’ny fadintseranana sasany noho ny fisian’ireo inspektera sy ireo mpiasa sasany mbola miasa.